ဝဲအကြောင်းသိကောင်းစရာ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဝဲဆိုတာ Sarcoptes scabiei ဆိုတဲ့ သေးငယ်တဲ့ ပိုးမွှားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားယားယံခြင်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုးလေးက အရေပြားကိုဖောက်ဝင်ပြီး ပြင်းထန်စွာယားယံစေနိုင်ပါတယ်။ ညဘက်မှာဆိုရင် ပိုပြီးကုတ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာစေပါတယ်။ ဝဲရောဂါက ကူးစက်တတ်ပြီးတော့ မိသားစု၊ မူကြိုကျောင်း၊ ထောင်၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာ စတဲ့နေရာတွေမှာ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် အလွယ်တကူပျံ့နှံ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ယောက်မှာ ဝဲဖြစ်ပြီဆိုရင် သူနဲ့ထိတွေ့မှုရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အခြားသူတွေကိုပါ ကုသဖို့ညွှန်ကြားလေ့ရှိပါတယ်။ ဝဲကိုလိမ်းဆေးလိမ်းပြီးကုသခြင်းဖြင့် ပိုးသေစေနိုင်ပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ်တော်တော်ကြာလောက်အထိတော့ အရေပြားယားကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။
- ယားယံခြင်း (ညဘက်တွင် ပိုဆိုးတတ်)
- အရေပြားတွင် အရေကြည်ဖုလေးများပေါက်ခြင်း၊
ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပေါက်နိုင်ပေမယ့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေနဲ့ ကလေးကြီးတွေမှာတော့ အောက်ပါနေရာတွေမှာ ပိုပြီးပေါက်တာများပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေမှာ အဖြစ်များတဲ့နေရာတွေကတော့ -
အရင်က ဝဲပေါက်ဖူးသူတွေမှာ ထိတွေ့ပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ရောဂါလက္ခဏာပြတတ်ပြီး ဝဲတစ်ခါမှမပေါက်ဖူးသူတွေမှာဆိုရင်တော့ ရောဂါလက္ခဏာက6ပတ်လောက်ကြာမှ စပြီးပြတတ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာမပြသေးသော်လည်း ရောဂါကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သိထားရပါမယ်။
ဝဲပိုးက အလွန်သေးငယ်ပြီး အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်မှပဲမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဝဲပိုးအမက အရေပြားအောက်မှာ အပေါက်ဖောက်ပြီး ဥဥပါတယ်။ ဥတွေပေါက်တဲ့အခါမှာ သားလောင်းလေးတွေက အရေပြားပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ အခြားအရေပြားနဲ့ အခြားလူတွေစီကို ကူးစက်စေပါတယ်။ ဝဲပိုးတွေ၊ ဥတွေနဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေက ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဓာတ်မတဲ့သောအခါမှာ ယားယံစေပါတယ်။ ဝဲပေါက်နေသူနှင့် နီးကပ်စွာထိတွေ့မှု၊ အဝတ်အစား၊ အိပ်ရာခင်း စသည်တို့မျှဝေသုံးစွဲခြင်းများပြုပါက ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
တိရိစၧာန်နဲ့လူတွေမှာ ကူးစက်တဲ့ပိုးချင်းမတူကြပါသလို ပိုးတွေကလည်း အမျိုးမတူရင် အကြာကြီးမနေနိုင်တဲ့အတွက် တိရိစၧာန်ကဝဲပိုးကိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်တောင် လူတွေမှာ ခဏပဲကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
ယားလွန်းတဲ့အတွက် အရမ်းကုတ်မိရင် အရေပြားတွေစုတ်ပြဲပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေထပ်ပြီးဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းကြောင့် အနာစက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါလူတွေမှာ ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ ဝဲရောဂါတစ်မျိုးကူးစက်တတ်ပါတယ်။
- HIV, သွေးကင်ဆာစတဲ့ ခုခံအားကျဆင်းစေသည့် နာတာရှည်ရောဂါများ
- ဘိုးဘွားရိပ်သာမှ သက်ကြီးရွယ်အိုများ
ဆရာဝန်က အရေပြားကိုကြည့်ပြီး ဝဲပေါက်တဲ့လက္ခဏာရှိ/မရှိကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အရေပြားအနည်းငယ်ခြစ်ယူပြီး အနုကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့လည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
1. Permethrin cream, 5% (Elimite) - ဝဲပိုးနဲ့ ဥတွေကို သေစေတဲ့ လိမ်းဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးထိန်းကျောင်းနေတဲ့မိခင်တွေကလွဲပြီး အခြားသူတွေမှာ စိတ်ချစွာလိမ်းနိုင်ပါတယ်။
2. Lindane lotion - အခြားလိမ်းဆေးတွေနဲ့ အဆင်မပြေရင် (သို့) မတဲ့ရင် ဒီဆေးကိုလိမ်းနိုင်ပါတယ်။ အသက်2နှစ်အောက်ကလေးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ ပေါင် 110 အောက်နည်းသူတွေမှာ သုံးလို့မရပါဘူး။
3. Crotamiton (Eurax) – တစ်ရက်တစ်ကြိမ်2ရက်လိမ်းပေးရပါမယ်။ ကလေး၊ နို့တိုက်မိခင်တွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာသုံးလို့မရပါဘူး။
4. Ivermectin (Stromectol) - သောက်ဆေးပါ။ ခုခံအားပုံမှန်မဟုတ်သူတွေ၊ ပြင်းထန်ဝဲပေါက်သူတွေနဲ့ လိမ်းဆေးနဲ့မပျောက်သူတွေကို ညွှန်ကြားလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်၊ 33 ပေါင်အောက်ကလေးတွေမှာ မပေးပါဘူး။ ဝဲတွေသေသွားရင်တောင်မှ ယားယံခြင်းကကျန်နေနိုင်တဲ့အတွက် အယားပျောက်ဆေးနဲ့တွဲပေးပါလိမ့်မယ်။
- အရေပြားကို အေးမြစွတ်စိုနေအောင်ထားပါ။ ရေအေးထဲတွင်စိမ်ခြင်း၊ ယားတဲ့နေရာကို စိုစွတ်တဲ့ရေအေးဝတ်နဲ့ပွတ်တိုက်ပေးခြင်းဖြင့် အယားသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
- Calamine လိမ်းဆေးလိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ယားယံခြင်းနဲ့ နာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
- Antihistamine - ဓာတ်မတဲ့တာကို သက်သာစေပါတယ်။
ဝဲပြန်မပေါက်စေဖို့နဲ့ တခြားသူတွေကို မကူးစေဖို့အတွက် အောက်ပါအချက်တွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
- ကုသမှုမခံယူမီ3ရက်အတွင်းအသုံးပြုထားသော တဘက်များ၊ အဝတ်အစားများ၊ အိပ်ရာခင်းများအားလုံးကို ရေနွေး၊ ဆပ်ပြာတို့ဖြင့် သေချာလျှော်ဖွတ်ပါ။ နေပူပူတွင်သေချာလှန်းပါ။
- ဝဲပိုးကို သေချာသတ်ပါ။ လျှော်ဖွတ်လို့မရတဲ့အရာအားလုံးကို ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲမှာ လုံအောင်သေချာထုတ်ပြီး ဝေးဝေးမှာ ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာအောင်ထားပါ။ (ဥပမာ-ကားဂိုဒေါင်) အစာစားဖို့မရှိရင် ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာ ဝဲပိုးတွေသေသွားပါလိမ့်မယ်။